သင်ဒီမှာရှိပါတယ်: နေအိမ် သိကောင်းစရာများ တစ်ဦးမော်နီတာရှေးခယျြဖို့ကိုဘယ်လို?
ဒီနေ့ရဲ့ကမ်ဘာတှငျ, alas, မကြာခဏမလိုအပ်တဲ့ဓါတ်ရောင်ခြည်ကနေကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်သင့်ချစ်ရသူကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းများကိုအမျိုးမျိုးရှိ. သို့သော်ထိုသို့အတော်လေးခက်ခဲသည်, ဤသူတို့သည်ရောင်ခြည်မမြင်ရတဲ့နှင့် imperceptible ကြောင့်. ပြည်တွင်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အထံတော်နှင့်လှုပ်ရှားမှုသာတိုင်းတာစေခြင်းငှါ အိမ်သူအိမ်သား dosimeter ၏.
ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်တွေတွင်, မြင့်မားတဲ့ဓါတ်ရောင်ခြည်နှင့်အတူထိုဒေသတွင်မကြာခဏနေထိုင်ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည့်, ပြောဆိုရန်ကြောက်လန့်. ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ကမှသင့်မိသားစုကိုကာကွယ်ဖို့ သာ. ကောင်း၏.
Dosimeter နေအိမ် - တစ်မျှမျှတတရိုးရှင်းတဲ့ device ကို, Geiger ကောင်တာများက Powered. ဒါဟာလေယာဉ်နောက်ခံဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုတိုင်းတာ, ကုန်ပစ္စည်းများ, ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာရပ်များ. သူ့ရဲ့ဒေတာအလွန်အမင်းတိကျ, ဒါပေမယ့်အိမ်မှာကသုံးစွဲဖို့လုံလောက်ပါတယ်. ထိုမှတပါး, လူ layman နားလည်သဘောပေါက်ရန်အတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့က.
သင်သည်အဘယ်သို့အာရုံစိုက်သင့်တယ်, အိမ်သူအိမ်သား dosimeter တက်ကောက်နေ?
အာရုံခံကိရိယာ၏နံပါတ်နှင့်အမျိုးအစားများမှတ်ချက်. ဒါဟာ device ကို sensitivity ကိုအပေါ်မူတည်.
အဆိုပါ device ကိုကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်အဆင်ပြေဖြစ်သင့်, ဒါကြောင့်သင်မည်သည့်ပြဿနာမျှမရှိဘဲသူတို့နှငျ့အတူကယူနိုင်ပါသည်.
ရရှိနိုင် optional ကို functions တွေ, အတိုင်းတာခြင်းရိုးရှင်းလိမ့်မည်သည့်.
Dosimeter အိမ်မှာလုပ်ကိုင်ရန်အတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်, အသုံးပြုမှုမှလေ့လာသင်ယူရန်လွယ်ကူသည်.
ရှေ့မှာ, သငျသညျသုတေသနလုပ်ငန်းရန်စတင်, ကျနော်တို့သတိရဖို့လို, ကသဘာဝအမြဲပစ္စုပ္ပန်ကိုသဘာဝနောက်ခံဓါတ်ရောင်ခြည်သည်, ကနျြးမာရေးမှလိုအပ်သောနှင့်အန္တရာယ်ကင်းသော. သို့သော်၎င်း၏ပိုလျှံရှုပ်ထွေးတဲ့အကျိုးဆက်များသယ်နိုင်.
အိမ်သူအိမ်သား dosimeter အသုံးပြု. ရေဒီယိုသတ္တိကြွအဆင့်ဆနျးစစျဖို့, ရ:
device ကိုကိုဖွင့်မည်. တစ်ဦးလေ့လာမှုအသစ်မှဆေးထိုး Reset, လိုအပ်ခဲ့လျှင်.
သင်ဖွင့်အာကာသစူးစမ်းလေ့လာချင်တယ်ဆိုရင် (လမ်း, ရုံး, မည်သည့်ဧရိယာ), လိုက်, device ကိုမညစ်ညူးကြောင်းဒါ. အကယ်. စုံစမ်းဆိုက် - အခန်း, ၎င်း၏တည်နေရာအများအပြားအတွက်သုတေသနပြု - မြို့ရိုးမှအနီးကပ်, ဗဟို, မျက်နှာကျက်.
သင်တစ်ဦးအရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်အစာထုတ်ကုန်စူးစမ်းလေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်, အဲဒါကိုတတ်နိုင်သမျှနီးစပ် device ကိုကိုင်. သင်ကစတိုးဆိုင်တွင်သို့မဟုတ်စျေးကွက်အပေါ်တိုက်ရိုက်သည်ဤတိုင်းတာထွက်သယ်နိုင်, ဖြစ်နိုင်ချေဝယ်ယူမီက: ဒါကြောင့်အစာရှောငျရဲ့ကအတော်လေးအဆင်ပြေသည်.
သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးနှင့်၎င်းတို့၏ချစ်ရသူ protected ဖြစ်ပါတယ်.